Dilkii Eng Yariisow halla baaro si uu u fududaado kiiska Ikraan | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliye ku xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, Gen Cabdladda Cabdallada, ayaa soo jeediyay in furaha baarista dilalka Saraakiisha NISA laga soo bilaabo dilkii Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), si loo helo natiijo rasmi ah.
Cabdalla, oo si weyn u yaqaanna Fahad iyo Farmaajo, isla-markaana la soo shaqeeyay in muddo ah, ayaa rumeysan in kiisaska saraakiisha Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka aan xal loo heli doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dilkii duqii Caasimadda.
“AUN Eng Yarisow ma ismiidaamin ayuu Ku dhintay mise miino kursiga iyo miiska loogu xiray? Basiira indhool miyaa ismiidamisay mise waa la Iska masabitay madama aysan isdifaaci karin oo ay dhimatay!. CCTV cameradii Xarunta xagee Ku danbaysaa? Ikraan oo ahayd xoghaynta gaar ah ee Eng Yarisow kana socotay xilligaas NISA, ma waxay u dhimatay Xog-ogaal nimadeeda kiiska eng Yarisow” ?­ ayuu yiri Cabdalla Cabdalla.
Wuxuu xaqiijiyay in saraakiil badan oo ka tirsan hay’adda NISA, loo khaarijiyay kiiska dilkii Injineer Yarisow, Isla-markaana wuxuu xusay in F&F ay dadaal kasta ku bixinayaan sidii ay ku dabooli lahaayeen kiiskaas, si aysan oodda u goosan kiisaska kale ee ku hoos duugan.
“Haddii aysan maxkamaddu kiiskaas (Dilkii Yariisow) hormar ka samayn kiisaska kale ee la xariira oo kan Ikran ka mid yahay wax hormar lagama gaari doono” ayuu yiri Taliye ku xigeynkii hore ee NISA.
25 bilood, ayaa laga joogaa qarixi xarunta gobolka Banaadir, ee uu ku dhaawacmay AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), ka hor inta aan lagu sii dhameystirin dalka Qatar, mana jiro wax baaritaan rasmi ah oo ay Dowladdu ilaa hadda ku sameysay kiiskaas.
Farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koraya siduu u dabooli lahaa kiiska Ikraan Taliil Faarax oo ah gabar sababsatay xog aroorin ay ku sameysay dilkii Jariisow, taas oo uu uga gol-leeyahay inuu gacmaha cadaadda kaga badbaadiyo eedeysane Fahad Yaasiin oo la rumeysan yahay inuu masuul ka yahay af-dubka iyo dilka Ikraan.
Kooxda Farmaajo, waxa ay abuurayaan fowdo siyaasadeed, taas oo horseedi karta in Caasimaddu marti aliso dagaallo kharaar, si uu mesha uga baxaan eedaha loo heysto hoggaankii hore ee NISA.